AKHRISO:- Muxuu yahay Garoonka diyaaradeed ee ay DFS ka dhisayso Muqdisho “Mala xidhayaa Aadan Cadde Airport”. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Salaad Oomaar oo kulankaas ka hadlay ayaa sheegay in wasaarddiisu ay diyaarisay Enjineeradii dhisi lahaa garoonka cusub Wasiir Oomaar ayaa kulanka ka sheegay in ay kordheen diyaaradaha ka dega garoonka Aadan Cadde, taas oo sababtay cariiri badan oo ka jira garoonka.
Sidoo kale waxa uu sheegay wasiirku in dhismaha garoonka cusub ay soo gaba-gabaynayaa inta lagu guda jiro sanadkaan 2019-ka Guddi uusan shaacin magacyadooda iyo inta ruux ee ay ka koobanyihiin ayuu sheegay wasiir Oomaar in ay u magacaabeen ka shaqeynta dhismaha garoonka cusub.
Mas’uuliyiinta ka socotay maamulada Hir-Shabeelle iyo Koonfur Galbeed ayuu sheegay in ay kala tashaneysay wasaaradu, halka laga dhisayo garoonka isagoo sheegay in labada Shabeelle oo labada dhinac xuduud kala leh gobolka Banaadir ay ka heystaan dhul laga hir galin karo garoonka cusub.
Previous articleDAAWO:- MD Madoobe oo soo dabcay sheegayna inuu diyaar u yahay inuu qaato guuldaradiisa.
Next articleXOG:- Xisbiga Wadani oo la kala dareeray “Maxay isku casishay Faadumo Siciid oo xubin muhiim ahayd”.